Nnwale saịtị na-eduga na obi ụtọ ntụgharị | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 4, 2012 Tuesday, January 3, 2012 Douglas Karr
Ewezuga ule maka ọchụchọ, ọsọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwere akụkụ dị oke mkpa nke saịtị nnwale nke ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịrụ ọrụ iji nyochaa otu esi eme ka ndị ọbịa ghọọ ndị ahịa. Ihe dị na peeji nke dị ka bọtịnụ ịkpọ oku, nhazi, igodo, oyiri, nkwalite, onyinye, usoro ndenye ọpụpụ, usoro nhọrọ ngwaahịa yana ọbụlagodi nchedo kwesịrị ịnwale mgbe niile iji chọta nsogbu ma melite arụmọrụ nke peeji ọdịda gị ma ọ bụ ibe ecommerce. .
Ndị ụlọ ọrụ na-enwe obi ụtọ na ọnụego mgbanwe ha na-eme, na nkezi, Pasent 40 ọzọ ule karịa ndị na-enweghị obi ụtọ.
Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ na-adọrọ mmasị site na infographic si Monetate, You na-agba ọsọ ule zuru oke na weebụsaịtị gị?. M na-eche ma ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ naanị n'ihi na ha ghọtara, site n'ule, ihe ị ga-atụ anya na arụmọrụ ntụgharị. Onye na-anaghị anwale naanị agaghị ama.
Tinyere ule ndị a, m ga-akwado nyocha nke ibe. Ọsọ bụ nnukwu ihe na ntụgharị na ọchụchọ. Enwere m mmasị n'iji ya Ngwá ọrụ Pingdom maka ịnwale ọsọ peeji.
Tags: ule ulennwale dị iche ichenyocha peejiule weebụ